Somali daily News – Maamul Goboleedka Labaad Oo Ka soo Horjeestay Xildhibaanada La Magacbaxay Madasha Horusocod…
Maamulka Juballand oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa ka hadlay madasha loogu magac daray Horusocod ee dhawaan looga dhawaaqay Magaalada Nairobi taasoo ay ku midoobeen Xildhibaano isugu jira Golaha Shacabka iyo aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweyne ku-xigeenka Juballand Max’uud Sayid Aadan oo saxaafada kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa si kulul u cambaareeyey Madashaas oo wada olole ka dhan ah xukuumada Soomaaliya.
Max’uud Sayid Aadan ayaa sheegay in madashaas aysan aheyn mid ku timid rabitaanka shacabka balseay sameysteen shaqsiyaad dano gaar ah leh oo doonaya iney carqaladeeyaan dowlada cusub.
“Horusocod maaha balse waa dibusocod la doonayo in horumarka dalka lagu hagardaameeyo, waxa ay faraha kula jiraana maaha wax shacabka Soomaliyeed ka gadmaya” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iney iska diidaan howlaha ay wadaan Xildhibaanadan doonaya iney carqaladeeyaan dowladooda.
Juballand ayaa noqday Maamulkii labaad ee ka soo horjeesta xildhibaanada la baxay madasha Horusocod, waxaa ka horeeyey maamulka Puntland oo si adag uga horyimid, maamulada kale ee federaalka ayaan weli ka hadlin arintan.